सिरियालाई ‘पृथ्वीको नरक’ बनाउने अमेरिकी आतंकवाद ! – Makalukhabar.com
सिरियालाई ‘पृथ्वीको नरक’ बनाउने अमेरिकी आतंकवाद !
सन् १९६७ मा मार्टिन लुथर किङ जुनियरले अमेरिकामा भड्किएको हिंसा र भियतनाम युद्धको हिंसालाई तुलना गरेर भनेका थिए ‘सडकमा मैले धेरै असन्तुष्ट युवा भेटेको छु । म उनीहरूलाई परिवर्तनका लागि हिंसाको बाटो छाडेर अर्को बाटो रोज्न आग्रह गर्छु । लगत्तै उनीहरू भन्नेछन्– ‘त्यसो भए भियतनाम युद्ध किन ?’ यसपछि उनीहरूलाई दिने उत्तर मसँग हुँदैन किनकि हाम्रो सरकार आफैँ हिंसा निम्त्याइरहेछ ।’
प्रसिद्ध मानवअधिकारवादी अभियन्ता मार्टिन लुथर किङको यो अभिव्यक्ति अमेरिका नै विश्वमा आतंकवादको खेती गरिरहेको छ भन्ने थियो । अद्यपी उनले आतंकवाद वा आतङ्कवादी जस्ता शब्द त प्रयोग गरेनन्, शायद त्यति बेला आतंकवाद शब्दको प्रयोग कम गरिन्थ्यो । अमेरिकी साम्राज्यवादकै उत्पादन ओसामा विन लादेनहरुको जन्म भएपछि आतंकवाद शब्दले ब्यापकता पायो ।
अमेरिकाले आतंकवादलाई जन्माईरहेको छ र प्रोत्साहन दिइरहेको छ भनेर आवाज उठाउने मार्टिन लुथर किङको ९ अप्रिल १९६८ मा हत्या भयो । त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकाले हुर्कारहेको ओसामा विन लादेन अन्ततः विश्व आतंकवादको पर्याय बन्न पुग्यो । ओसामा विन लादेनकै नेतृत्वमा सेप्टेम्बर ११,२००१ मा अमेरिकाका ट्वीन टावरमाथि कहालिलाग्दो आतंककारी आक्रमण भयो । आफैले पालेर हुर्काएको आतङ्कवादीका कारण अमेरिका मात्र होइन विश्व नै त्रसित हुन पुग्यो । पछि अमेरिकाले विन लादेनलाई सखाप पार्ने नाममा अर्को आतङ्क सृजना गर्‍यो, अफगानिस्तान, इराक लगायत देशहरू अमेरिकाबाट ध्वस्त बनाइए । जुन लडाइँमा करिब २० लाख मान्छे मारिए ।
अमेरिकाले विश्वभर मच्चाइरहेको बर्बर दमनबाट अहिले विश्व आतंकित छ । विश्वमा अमेरिकी आतंकवाद यसरी फैलिरहेको छ कि अमेरिकाको स्वार्थ विपरीत चल्न खोज्ने राष्ट्रमाथि उसको क्रूर हिंसा सुरु हुन्छ, अनि हिंसाको चपेटामा पर्छन् निर्दोष नागरिक र अबोध बालबालिकाहरू ।
हो, अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले सिरियामाथि त्यही क्रुरता देखाइरहेको छ । यति बेला अमेरिका र त्यसका मतियारहरुले सञ्चालन गरिरहेका युद्ध अपराधका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा विश्वभरि भाईरल भइरहेका छन् । ती यति दर्दनाक छन् कि न कसैले शब्दमा वर्णन गर्न सक्छ न त मुटु देह गरेर हेर्न र सुन्न सक्ने अवस्था नै छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेशका शब्दमा सिरियाको गुटा क्षेत्र यति बेला पृथ्वीको नरक बनेको छ । तर, सिरियालाई नरक बनाउने स्वयम् अमेरिकी साम्राज्यवादी र त्यसको आडमा पालितपोषित साम्राज्यवादीहरू नै हुन् । यति बेला सिरियामा मानिसले बाँच्न पाउने हक सम्पूर्ण रूपमा लुटिएको छ । साम्राज्यवादका नङ्ग्राहरू मानव अधिकारमाथि नराम्रोसँग धावा बोलिरहेका छन् ।
सन् २०११ मा राष्ट्रपति बसर अल असदलाई हटाउन सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सरकारी दमनसँगै हिंसात्मक बन्दै गयो । आन्तरिक द्धन्द्धमा फँसेको सिरियामाथि विभिन्न बहानामा साम्राज्यवादी देशहरूले खेल्न सुरु गरे । करिब ७ वर्षदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण तीन लाख २० हजारभन्दा बढी सिरियालीको ज्यान गुमेको संयुक्त राष्ट्रसंको तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वका कारण त्यहाँको झन्डै आधा जनसङ्ख्या विस्तापित बनेको छ । राजधानी दमास्कसको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र पूर्वी गुटामा मच्चिएको हिंसामा परी एक हप्तामै करिब ७०० नागरिक मारिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा बमबारी भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति बसर अल असादले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति विद्रोहीलाई ध्वंस पार्नमा लगाइरहेका छन् । उनलाई बाहिरबाट रसिया, इरान, चीन, इराक र उत्तर कोरियाले सहयोग गरिरहेका छन् ।
विद्रोही पक्षलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने बाहिरी देशहरूमा अमेरिका, कतार, साउदी अरेबिया, टर्की, इजरायल, अमेरिकन खुफिया एजेन्सी (सीआईए), फ्रान्स र लिबिया रहेका छन् ।
स्वार्थको भारी बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका अगाडि सिरियन नागरिकहरू बुख्याँचाजस्तै बनेर एकले अर्कालाई तर्साइरहेका छन् र मारिरहेका छन् । त्यहाँ लडाकु समूहहरू यति धेरै भए कि कुन समूह कोसँग लड्दै छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भइसकेको छ । इरान, रसिया, अमेरिका र अरब देशहरूको भूमिका मुख्यरूपमा सरकार पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छन्, तर आन्तरिक लडाकु समूहहरूले पनि छुट्टै सहयोग प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा सिरियामाथि नरसंहार मच्चाइएको छ । साम्राज्यवादी देशहरू आफै आतंकवाद उत्पादन गर्ने अनि त्यसका विरुद्ध जेहाद छेड्ने दोहोरो भूमिकामा छन् । विश्वभरि हतियारको बिक्री वितरणमार्फत उनीहरू आतंकवाद फैलाउने गर्छन्न् अनि त्यही हतियार विरुद्ध फेरी अर्को पक्षलाई हतियार उठाउन उक्साउँछन् । विश्वभर आफ्नो एकछत्र राज कायम गर्न अमेरिकाले विश्वभर आतङ्क मच्चाइरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी मात्र हो सिरिया ।
सिरियामा भइरहेको आतङ्क तथा जनहत्याका घटनाहरू तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावना देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको युद्ध विरामलाई स्वयम् साम्रज्यवादीहरुले नै उल्लङ्घन गरेका छन् । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि अमेरिकी कठपुतली हो, जसले अमेरिकाको स्वार्थ अनुसार नै काम गर्दै आइरहेको छ ।
सिरियामाथि भइरहेको बर्बर दमन विरुद्ध विश्वभरिका शान्तिकामी जनताले आवाज उठाउनुपर्छ । साथसाथै अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका कठपुतलीहरूलाई जनहत्या बन्द गर्न दबाब दिन पनि जरुरी छ । विश्वका राष्ट्रहरू यसविरुद्ध बोलुन् र त्यहाँ भइरहेको निहत्था नागरिक माथिको हत्याको श्रृंखला तत्काल रोकियोस्, यही कामना ।